Madaxweynihii hore ee Soomaaliya” ma aqbaleyno in dadkeena maalin walba la iska dilo” – Somali Top News
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya” ma aqbaleyno in dadkeena maalin walba la iska dilo”
March 1, 2019 Somali Top News	0 Comments
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul uga hadlay weerarkii qaraxa ku bilaawday ee xalay ka dhacay Magaalada Muqdisho, isgaa oo sheegay in Shabaab aan wada-hadal lagala geli doonin dhigga shacabka Soomaaliyeed.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in weerarkaasi ay aad uga xun yihiin, isla markaana ay ka tacsiyadeynayaan dadkii ku dhintay, waxaana uu sheegay in ay xanuunka la qeyb sanayaan.
Isaga oo sii hadlayay ayuu sheegay in Al-Shabaab maalin walba ay daadiyaan dhiiga Shacabka Soomaaliyeed, balse taasi aan lagala galeyn wadahadal, hayeeshee uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo Beesha Caalamka ay diyaar u yihiin wadahadal.
“Runtii dalkan Soomaali ayaa leh malaha dad kale, mala aqbalaayo in dadkeena maalin walba la iska dilo, Al-Shabaab iyo Daacish waxaana leenahay dadkiina soomaaliyeed dhinac kasoo raaca ee wadahadal qaata, laakin wadahadal idinkama galeyno inad dadkeena leysaan ayuu yiri Xasan Sheekh.
Xasan Sheekh ayaa sidoo kale booqday Isbitaalka Digfeer wuxuuna dhiig ugu deeqay qaar kamid ah bukaanada.
Dhalinyarada weli ka barbar dagaalamaya Al-Shabaab ayuu ugu baaqay inay kasoo baxaan, isla markaana ay dowladda Federaalka Soomaaliya ksoo biiraan.
Weli Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya ugu sareysa kama hadlin weerarkaas oo weli la soo sheegayo inay rasaas ka dhaceyso Wadada Maka-Almukarama.
← Fahad Yaasiin oo ku fashilmay wax ka qabashada Qaraxyada ka dhaca Muqdisho
Alpha Group oo lagu wareejiyay howlgalka ka socda Muqdisho, kadib shuruud loo fuliyay →
Jabuuti oo Maxkamdda ICJ ka dacweyneysa dowladda Eretria
November 16, 2018 Somali Top News 0
Burcad isugu jiro Ciidan iyo Maleeshiyo oo xukun adag lagu riday
March 27, 2019 Somali Top News 0
Soomaaliya oo ka maqan shirka IGAD ee Nairobi
April 3, 2019 Somali Top News 0